Yintoni Ebizwa NgamaQovachs Okugqibela?
I-Kovács (Ковач) yintsimi elithetha "umgcini" okanye "smith" ngolwimi lwesiHungary, kwi-Slavonic Kovaè. IsiHungary esilingana nesiqhelo sesiNgesi uSmith, uKovács ngowona wesibini igama eliqhelekileyo eHungary.
I-Kovacs yinto yesibini yesiqhelo esiqhelekileyo ngesiHungary ngokubhekiselele kwifayili yokusabalalisa igama kwi-Forebears.
Igama lomthombo: isiHungary, iSlavic
Igama legama elithethiweyo : I- KOVATS, KOVAC, KOVAT, KOVATS, KOVACH, KOWAL, KOVAL
Imincili ngegama likaKovács
Igama le-Kovacs ngokuqhelekileyo livela eHungary, nangona oku akunjalo ngaso sonke isikhathi. Amagama amaninzi afana neKoch (iKarpatho-Ruthenian), iKowal (Poland) neKoval (Ukraine). Ingqungquthela yeKova ingaba yintsikelelo yokuqala, i-adaptation ye Kovacs, okanye inguqu encinci yegama elide njengeDukovac. Zizo zonke izikhokelo eziqhelekileyo, nangona kunjalo. Utshintsho oluthile lomnxeba olusetyenziswa ngentsapho lwakho lunokuthi lube lufana nolulula njengenguqu yokupeliswa kwaye akukho nto enokuyenza ngayo kwimvelaphi yalo yangaphambili.
Abantu abaPhezulu abanegama elibizwa ngokuba ngu-KOVACS kunye noTshintsho
U-Ernie Kovacs - umculi othandwayo we-TV waseMerika
ULászló Kovács - i-cinematographer eyaziwayo
UTom Kovach - umbhali waseMelika kunye nomlindi-ntliziyo
ULuca Kovač - umlingiswa onobuqili (ugqirha) oboniswe nguGoran Višnjić kwiingqungquthela ze-TV ze- AM ER
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name KOVACS
I-Kovacs / i-Kovats FamilyProree Project DNA
Iprojekthi ye-Y-DNA ivulelekile kubo bonke abantu abanegama elithi Kovacs, iiKovats, okanye nayiphi na isiphumo ezifana neKovaks, iKovak, Kovac, Kohen, Kohan, Kohn, Kovan, njl.
I-Kovacs Crest Family - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto enjengekhaya laseKova okanye iingubo zeengalo zegama le-Kovacs. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
IKovács Family Genealogy Forum
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa lomnxeba wefayile yeKovács ukufumana abanye abanokuphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho weKovács.
I-FamilySearch - I-KOVACS Genealogy
Hlola iirekhodi ezingama-1.4 yezigidi zembali kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca othunyelwe ngegama le-Kovacs kunye neenguqu zayo kwi-website ye-FamilySearch yamahhala, ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
I-KOVACS Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLondolozo lweentsapho
I-RootsWeb iyabamba amanqaku amaninzi angabhafisi adibanisa abaphandi begama leKovács.
DistantCousin.com - I-KOVACS Imvelaphi Yokuzalwa Yomdla & Yentsapho
Iinkcukacha zolwazi zamahhala kunye neefalo zokuzalwa zohlobo lwegama lokugqibela elithi Kovács.
I-Kovacs Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zoobuhlanga kunye neembali zabantu abathile abanegama elidumileyo elithi Kovacs kwi-website ye-Genealogy Today.
I-HOFFMANN Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
I-WRIGHT - Yithi Igama & Isiqalo
ESL ngeenjongo zezoNyango
Indlela yokudweba i-Face Face
I-Drexel GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
25 Khetha iiLines kwiimifanekiso ezenza i-Ice Breakers enkulu
I-Wave Particle Deality kunye nendlela eSebenza ngayo
I-Biography kaBenito Juárez: I-Mexican Reformer yaseMexico
Indlela yokujongana nobunzima bokubhukuda kwakho
Ngaba Izinto Ezixhamlayo Zisebenza Ngomnyama?
Lepenski Vir Virtual - Village Village Mesolithic eRiphabhliki yaseSerbia
Abalawuli baseChina beXia Dynasty